Famaritana: Fanaraha-maso laza, fanadihadiana ny fihetseham-po ary fanairana momba ny fikarohana sy ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Raha ny ankamaroan'ny sehatra teknolojia marketing ho an'ny fanaraha-maso ny lazany sy ny famakafakana ny fahatsapana dia mifantoka tanteraka amin'ny media sosialy, Fanamarihana dia loharano feno amin'ny fanaraha-maso ireo na rehetra voalaza momba ny marikao an-tserasera.
Izay fananana nomerika mifamatotra amin'ny tranokalanao na manonona ny marikao, ny vokatrao, ny tenirohy, na ny anaran'ny mpiasa… dia harahi-maso sy hozahana. Ary ny sehatra Brandmentions dia manome fanairana, fanaraha-maso ary famakafakana ny fahatsapana. Fanamarihana ahafahan'ny orinasa manao:
Manangana fifandraisana efa vita - Mahita sy miaraha miasa amin'ny mpanjifanao sy ireo mpiorina ifotony ao amin'ny fonenanao izay hanome anao fampahafantarana marika lehibe kokoa & fahitana tsara momba ny tsena kendrenao.
Mahazoa ary tazomy ireo mpanjifa - Fantaro ny tombotsoan'ny mpanjifanao ary mamorona vokatra mifanaraka amin'ny filany sy ny hetahetany. BrandMentions dia milaza aminao ny toerana hampiroboroboana ny vokatrao sy hahitanao mpanjifa vaovao.
Tantano ny lazan'ny marika - Amin'ny fahalalanao foana hoe iza no miresaka momba anao ary inona, dia azonao ny mahatakatra sy miaro ny lazanao eo amin'ny tsena mifaninana mahery setra.
BrandMentions dia nanjary fitaovana ilaina amin'ny fandrefesana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing. Miasa mafy izahay amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika an-tserasera, ary tsy misy fitaovana hafa notsapainay nahita fa misy firesahana mifandraika betsaka amin'ny BrandMentions. Tena mamporisika azy izahay!
Mark Traphagen, talen'ny Senior Evangelism ao amin'ny Temple Stone
Miaraka amin'ireo tranokala, Fanamarihana manara-maso sy misambotra ny lazan'ny haino aman-jery sosialy ao amin'ny LinkedIn, Reddit, Facebook, Foursquare, Twitter, Pinterest, ary Youtube.
Anisan'izany ny marika Brandmentions:
Fanaraha-maso ny tranonkala sy sosialy - Araho maso izay rehetra voalaza momba ny orinasanao na ny vokatrao amin'ny fantsona rehetra misy olana, na amin'ny Internet izany na amin'ny media sosialy. Ny Brand Mentions dia mitazona anao hatrany amin'ny zava-dehibe rehetra eo amin'ny tsenanao sy izay mifandray amin'ny orinasanao, manome fampandrenesana amin'ny fotoana tena mahitsy mankany amin'ny boaty.
Fitsikilovana mpifaninana - Ny safidy ny paikadin'ny mpifaninana aminao dia tsy safidy fotsiny. Izy io dia ampahany ilaina amin'ny paikadinao amin'ny fitomboana. Arakaraka ny ahalalanao ny momba ny orinasanao sy ny mpifaninana aminao no ahafahanao mianatra, mampifanaraka ary mandroso amin'ny farany. Azonao atao izao ny mitsikilo ireo mpifaninana amin'ny lafiny samihafa ary manana fomba fijery mazava kokoa momba ny toerana misy ny fifaninanana.
Fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy - Jereo hoe iza no nanonona anao sy ny fotoana nanaovan'izy ireo izany. BrandMentions dia manome fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy isaky ny mahazo resaka na rohy vaovao ianao. Ankehitriny ianao dia mahazo fidirana eo noho eo ny angon-drakitra fitsikerana rehetra mifandraika amin'ny marikao amin'ny tranokala sy tambajotra sosialy.
Ny kaonty Brandmentions-ko
Foana aho mampiasa Fanamarihana nandritra ny roa volana izao ary nahafinaritra. Ny fahaizana manara-maso ny zava-drehetra amin'ny sehatra tokana dia tena ilaina tokoa. Naharitra minitra vitsy monja ny fananganana ny kaonty ary nanisy lohahevitra vitsivitsy (ary koa ny tranokalako) hihainoana.
Ny mailaka feno isan'andro dia izay ilaiko fotsiny hijerena sy hamaliana ireo voalaza ao amin'ny tranokalako amin'ny anarana na amin'ny URL:
Hatramin'ny nanomboka nampiasaina Fanamarihana, Efa:
Namantatra famoahana hafa izay nangalatra ny atiny. Nesorin'izy ireo ny atiny ary tsy naverin'izy ireo indray.
Fantaro ny varotra sasany influencers izay nizara ny atiny izay tsy narahiko na naneho ny fankasitrahako.
Fantaro ireo tranonkala sasany izay efa nadinadinina na nosoratan'ireo mpandahateny hafa - manome fotoana iray hahafahako mahazo fampahalalana fanampiny.
Tsy manahy ny amin'ny famakafakana ny fahatsapana aho satria tsy manoratra serivisy na zavatra mampiady hevitra ny famoahana ahy. Na izany aza, raha mivarotra vokatra na serivisy ianao, ny fahatakarana raha tsara ny fahatsapana momba ny marika na ratsy dia manakiana mafy ny fahombiazan'ny orinasa.
Manomboha fanandramana marika maimaim-poana
Tags: fanaraha-maso ny backlinkfanaraha-maso ny marikamarikafanaraha-maso ny fifaninananafaharanitan-tsaina amin'ny fifaninananaFacebookFanaraha-maso ny Facebookefa-joro sokerafanaraha-maso efamirafanaraha-maso ny tenifototrafanaraha-maso teny lakileLinkedInLinkedIn fanaraha-masomanonona fanairanaPinterestfanaraha-maso pinterestreddit Googlefanaraha-maso redditfitantanana lazafanaraha-maso lazafihetseham-pofamakafakana ny fahatsapanahaino aman-jery sosialyfanairana amin'ny media sosialyfanaraha-maso ny media sosialyTwitterfanaraha-maso ny twitterYouTubeFanaraha-maso YouTube